Isbaheysiga Sucuudiga oo ku hanjabay inay tallaabo adag ka qaadi doonaan Qadar – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Isbaheysiga Sucuudiga oo ku hanjabay inay tallaabo adag ka qaadi doonaan Qadar
Dowladaha Sucuudi Carabiya, Masar, Isutagga Imaaraadka Carabta iyo Baxreyn ayaa bayaan ay soo saareen ku hanjabay inay tallaabo adag oo hor leh ay ka qaadi doonaan dalka Qadar.
Bayaan ay dowladahaasi si wadajir ah usoo saareen ayaa waxay ku sheegeen in jawaabtii Qadar ay ka bixisay dalabkoodii ee 5-tii bisha June ay soo saareen uu yahay mid aan la aqbali karin oo ay dowladda Qadar iska dhega tirtay qodobadii laga sugaayay inay fulliso.
Sidoo kale, bayaanka ayaa waxaa lagu sheegay inay qaadi doonaan tallaabooyin aysan shaacin doonin, si dowladda Qadar looga abaal-mariyo madax adeyga iyo falalkeeda taageerada argagixisada ee ay ka wado gobolka islamarkaana ay qalqal ku gelisay ammaanka iyo nabadda gobolka iyo caalamka.
Dhinaca kale, hanjabaada kasoo baxday isbaheysiga uu hoggaaminaayo dalka Sucuudi Carabiya ayaa timid kadib markii afhayeenad u hadashay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Heather Nauert ay shaaca ka qaaday in khilaafka dalalka Khaliijka iyo Qadar uu gaaray meel sare.
Ugu dambeyn, afhayeenadda ayaa sheegtay in khilaafkaasi laga yaabo inuu sii socdo muddo bilooyin ah, inkastoo Mareykanka uu ka digay in awood militeri la isku adeegsado.